Maxay ka dhigan tahay marka uu i fiiriyo oo ii dhoola cadeeyo? - Talooyin ku socda ragga | Ragga Caqliga leh
Maxay ka dhigan tahay marka uu i fiiriyo oo ii dhoola cadeeyo?
Alicia tomero | 02/09/2021 23:41 | Lamaanaha iyo Galmada
Ma aha markii ugu horreysay ee aad la kulanto gabadhaas iyo mid ka mid ah daqiiqadahaas way ku eegaysaa wayna ku dhoola cadaynaysaa. Waxay noqon kartaa daqiiqad aad jeceshahay ama laga yaabo inaadan aad ugu faraxsanayn tilmaantaas. Waxa runta ah waa iyada oo u naxariisanaysa iyo wuxuu rabaa nooc ka mid ah isku xirnaanta.
Muhiim ma aha in aad dib u ceshato tilmaanta, laakiin in aad joogtid joogga mudane iyo dib u fiiri tilmaam fudud salaan yar. Waxay noqon lahayd mid aad u dhiirran haddii aad u soo dhowaato oo adigu is baro, laakiin taasi waa haddii aad runtii tahay wiil dhiirran. Si kastaba ha ahaatee, marna ma xuma in la isticmaalo naxariista.
1 Hadday si lama filaan ah gabadhaasi kuu soo eegto
2 Wuu ku eegayaa, dhoola cadeynayaa oo taaban doonaa timaha
3 Soo ogow waxa muuqaalku kuu sheegi karo
4 Haddii uu ku eego oo dhoola cadeeyo adiga uun
Hadday si lama filaan ah gabadhaasi kuu soo eegto
Waxaad dareentay gabadh waxayna ku beegan tahay inay ku jirto isha. Waxaa laga yaabaa in muuqaalkaagu isku beegmo oo lala yaabo waa tii ku soo eegtay. Ma aha oo kaliya muuqaal laakiin sidoo kale wuu kugu dhoola cadeynayaa. Waad la yaabtay oo malaha ma awoodid inaad ogaato sida ay tahay inaad uga falceliso.
Muuqaalkaas gadaashiisa iyo dhoolla -caddayntu waxay ka yimaadaan dhaqdhaqaaqyo kale. Haddii ay ku eegayso iyo dhawr jeer ayuu fiiriyaa markaad fiiriso, markaa waxaa ugu wacan inuu aad kuu jecel yahay. Waqtigan xaadirka ah, haddii aad xiisaynayso waa inaad u dhowaataa oo aad is barataa, Waa inaad ogaataa haddii ay tahay qof bulshada dhexdeeda ah oo xiiso kuu leh.
Wuu ku eegayaa, dhoola cadeynayaa oo taaban doonaa timaha
Maxaa loola jeedaa marka gabadhaas wuu ku eegayaa, dhoola cadeynayaa oo taabanaysaa timaha? Waxay kordhineysaa dhaqdhaqaaqyadeeda, way ku dhoolla caddeysay oo waxay horeyba ugu sheegtay xiisaheeda adiga kugu saabsan. Sidoo kale, haweeneydu markay aad u soo jiidato waxay jeceshahay inay timaheeda taabato, taasi micnaheedu waa inuu ku majeerto dareenna kuu qabo.
Haddii, marka lagu daro, uu si joogto ah u dhoollacaddeeyo oo u dhalaalayo, waxaa jira calaamado aad u badan oo kugu kicinaya waad iman kartaa oo la hadli kartaa. Shaki la'aan, wuxuu si aad ah u fududeynayaa daqiiqadaas mana joojiyo bixinta tilmaamo cad oo uu ku jecel yahay.
Waqtigaan oo kale waa inaad ka faa’iidaysataa munaasabadda Haddii gabadha ku fiirineysa ay ku dhoolla caddeyso, dhab ahaan ma ka hadli karnaa soo jiidashada? Hadday sidaas tahay, hadda wiilku waa inuu qaataa talada, soo dhawaaw, la hadal oo ka dhig haweeneydaas inay dareento inaad adna xiise u leedahay.
Soo ogow waxa muuqaalku kuu sheegi karo
Raadi dhammaan faahfaahinta ku dhaca muuqaalkaas. Si aad u ogaato sida ay tahay inaad uga falceliso muuqaalka waa inaad xalliso xoogaa xujooyin ah. Haddii gabadhaasi xishooto malaha muuqaalkaaga iyo ujeeddadaadu waa wareersan yihiin.
Waxay haysaa indhaheeda, laakiin daqiiqada aad rabto inaad eegto iyada wejigaaga jeedi. Gabadhaas ayaa bixinaysa calaamadaha xishoodka, maadaama ay jiraan dad abuura fikirkaas yar ee welwelka ku saabsan inaan la aqbalin. Hubaal Waan ku arkay sababtoo ah waxaan ahaa mid xiiso badan iyo bogaadin, laakiin wuu iska ilaalinayaa muuqaalkaas maxaa yeelay kuma dhaco inuu tallaabadaas qaado.
Haddii, dhanka kale, ay sii ahaato mid la soo jiito oo ha iska ilaalin araggaaga waxaa sabab u ah waa gabar hubaal ujeedooyinkaaga sidaas darteedna uu doonayo inuu sii wado xiisahaas. Haddii, marka lagu daro, si kasta oo ay gabadhu u dhoolla caddaynayso, ha ka shakinin inay hubaal tahay ujeeddadeedu. Malaha rabtaa wax ka badan isha isha. Marka haweeneydu u dhoolla caddeyso wiil, waxay qeyb ka dhigeysaa ujeeddooyinkeeda si ay wax wanaagsan u dhacaan.
Haddii wadahadal la qabto waxaa hubaal ah inay jiri doonto isgoys joogto ah oo jaleeco. U fiirso sida wada hadalkaagu u dhacayo iyo haddii gabadhu aad u dhoolla caddaynayso. Sidoo kale, ogow haddii uusan lumin faahfaahinta waxaad u sheegto, haddii uu ku dhaygago iyo haddii uu damacsan yahay inuu ku taabto, waayo shaki kuma jiro inuu ku jecel yahay.
Haddii uu ku eego oo dhoola cadeeyo adiga uun
Daqiiqad kale oo laga yaabo inay xiiso leedahay waa markaad la joogto koox asxaab ah ama dad aad taqaanno. Qof dumar ah oo aad taqaan wax aad u yar ayaa ku soo eegaysa waana lama huraan in dhammaantiin inta aad wada sheekaysanaysaan aad qosol ka buuxisaan, laakiin si gaar ah dhoollacaddaynta iyo muuqaalkaas ayaa adiga kuu gaar ah. Xitaa haddii mawduucu uusan ahayn mid qosol leh, sii wad kula wadaagaya ayaa u muuqda oo dhoola cadeynaya. Waa lama huraan inuu ku shukaansado ama wuxuu u baahan yahay inuu kuu soo dhawaado maxaa yeelay wuu ku jecel yahay.
Haddii aad rabto inaad ogaato tilmaamo badan waad fiirin kartaa xitaa marka doonayo inuu ku soo duulo booskaaga gaarka ah. Way soo dhowdahay, waxay doonaysaa inay kuu soo dhawaato waxayna kuu samaysaa wada hadal aysan rabin inay ku dhammaato, sidoo kale shukaansiga iyo dhoolla caddaynta. Miyaad dareentay inuu sidoo kale si joogto ah u eego bushimahaaga? Dhab ahaantii waa astaan ​​aad rabto inaad dhunkato, afkaagu wuxuu u muuqan doonaa mid dareen badan.
Si kastaba ha noqotee, hubaal waxaad gaadhay xiriirkan maxaa yeelay waxaa jira qof qarsoon oo aad jeceshahay inaad la wadaagto xiisahaaga. Haddii calaamadahan oo dhami meel ka soo baxaan, ama si joogto ah kuugu dhacaan meel kasta oo yoolkaagu yahay, waa inaad shaki la’aan ka faa’iidayso fursadan. Haddii aad rabto inaad sii wadato akhrinta wax badan, waad aqrin kartaa waxa sameeya «marka haweeneydu ku fiiriso ».
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Maxay ka dhigan tahay marka uu i fiiriyo oo ii dhoola cadeeyo?
Noocyada dharka ragga ee ugu fiican
Sida loo xidho surwaal aroos